Wararka Maanta: Jimco, Nov 30, 2012-Maamulka Degmada Beledxaawo oo Gacanta ku Dhigay Xoolo la Sheegay in ay Shabaab u iibgeeyeen Degmadaasi
Jimco, November 30, 2012 (HOL) —Maamulka ururka Ahlusunna ee degmada Beledxaawo ayaa gacanta ku dhigay xoolo fara badan oo loo iibgeeyay degmadaasi, kuwaasoo maamulku sheegay in ay leeyihiin Al-shabaab.
Afhayeenka ururka Ahlusunna ee gobolllada Koonfureed Sheekh Max’ed Xuseen Al-qaadi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen xoolo fara badan oo isugu jira Geel, Lo' iyo Ari kuwaasoo ay xoogagga Al-shabaab rag u soo dhiibeen si magaalada Beledxaawo loogu iibiyo.
Masuulkani ayaa xusay in arintaasi ay kusoo wargeliyeen qaar katirsan dadkii xoolaha lahaa, wuxuuna sheegay in xoolahani ay yihiin kuwo ay Al-shabaab zako ahaan uga qaadeen shacabka ku dhaqan gobolka Gedo, islamarkaasina loo soo dhiibay rag si ay halkani ugu iibyaan.
“Xoolo ay soo dhaceen oo zako ahaan u soo qaadeen ayaan gacanta ku soo dhignay, dadkii xoolahaasi lahaana dib ayaan ugu celineynaa,” ayuu masuulkani hadalkiisii yiri, isagoona intaa ku daray in ay xabsiga dhigeen raggii xoolaha iibinayay.
Dhinaca kale madaxa Zakawaadka Al-shabaab ee gobolka Gedo Sheekh C/risaaq Shureym oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hadalka kazoo yeeray maamulka Ahlusunna uu yahay mid aan sal-iyo raad toona lahayn, wuxuuna beeniyay in ay iyagu leeyihiin xoolaha ay gacanta ku dhigeen maamulka Ahlusunna ee degmada Beledxaawo.